Madaxweyne Farmaajo oo casuumaad rasmi ah ka helay boqorka dalka Qadar – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo casuumaad rasmi ah ka helay boqorka dalka Qadar
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan uu booqasho rasmi ah ku tago dalka Qadar, kadib markii uu casuumaad ka helay boqorka dalkaasi Sheekh Tamiim Bin Xaamid Al-Thani.
Madaxweyne Farmaajo oo shalay magaalada Riyaad kullan kula qaatay Boqorka dalka Qadar Sheekh Tamiim Bin Xaamid Al-Thani ayaa waxay labada dhinac isla soo qaadeen arrimaha amniga iyo dib u dhiska ciidamada xooga dalka.
Agaasimaha warbaahinta madaxtooyadda Soomaaliya C/nuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in labadaasi mas’uul ay ka wada hadleen in xiriirka labada dal kor loo qaado.
“Dalka Qadar waxa uu ka mid yahay dalalkii ugu horeeyay ee casuumaad usoo diray madaxweynaha Soomaaliya, balse xilligaasi madaxweynuhu nasiib uma aanu helin inuu tago, Boqorka Qadar tii uun buu ku xoojinaayay madaxweynaha” Sidaas waxaa yiri agaasimaha warbaahinta madaxtooyadda Soomaaliya C/nuur Maxamed Axmed.
Muddo todobaad kahor ayay ahayd markii ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre uu dalka Qadar kaga qeyb-galay shirka Doha Forum oo sanadkiiba mar lagu qabto dalkaas.
Shirkaasi Doha Forum ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, amniga iyo qaxootiga, waxaana shirkaasi ka qeyb galay hay’addo caalami ah, deeq bixiyaal iyo siyaasiyiin dunidda caan ka ah.